ဇာတ်လမ်း၊ ဇာတ်အိမ်ခိုင်မာတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ရိုက်ကူးပြီး အောင်မြင်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ကိုရီးယား ထိပ်တန်းမင်းသမီးအချို့ဟာ အသက်ကန့်သတ်ထားတဲ့ လူကြီးဇာတ်ကားတွေကိုလည်း ၀တ်လစ်စလစ် ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင် ဘယ်သူတွေက ဘယ်လိုမျိုးသော ဇာတ်ကားမျိုးတွေကို ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးသလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ရှုစားကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
အခုလက်ရှိမှာ အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမ်ီး Sung Hyun Ah ဟာဆိုရင် လူကြီးဇာတ်ကားတွေများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဇာတ်ကားတွေထဲကမှ Time, Lover, Woman is the Future of Man နဲ့ The Scarlet Letter ဇာတ်ကားတွေဟာဆိုရင် ဒီနေ့အချိန်ထိ ပြောစမှတ်တွင်နေကြဆဲပါ။ သူမ အ၀တ်ဗလာနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကို သူမရဲ့အေဂျင်စီက Website မှာ တင်တုန်းကဆိုရင် အင်တာနက်ဆာဗာလကျလောက်တဲ့အထိတိုင်အောင်ကို ကြည့်ရှုသူတွေ များခဲ့ဖူးပါတယ်တဲ့။
8. Kang Hye Jung
ပရိသတ်တွေနဲ့ မစိမ်းတဲ့မင်းသမ်ီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး Kang Hye Jung ကတော့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ မဂ္ဂဇင်းမော်ဒယ်အဖြစ်နဲ့ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Oldboy ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားမှာ ၀တ်လစ်စလစ်နဲ့ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူမဟာ သူမရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ထိုဇာတ်ကားနဲ့ပဲ Blue Dragon Film Awards ဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့မင်းသမီးဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရုပ်ရည်အချောကြီိးမဟုတ်ပေမယ့်လည်း သဘာဝကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် နာမည်ကြီးတဲ့ မင်းသမီး Bae Doona ဟာဆိုရင်လည်း လူကြီးဇာတ်ကားလို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ Plum Blossom ဇာတ်ကားမှာ မင်းသား Kim Rae Won နဲ့ တွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဇာတ်ကားထဲဟာ ပါဝင်တဲ့ ချစ်တင်းနှောခန်းတွေကြောင့် နာမည်ကြီးခဲ့ပြီး အဆိုပါဇာတ်ဝင်ခန်းတွေဟာလည်း လူစားထိုးပြီးရိုက်ကူးတာလား၊ သရုပ်ဆောင်တွေ ကိုယ်တိုင်ပဲ ရိုက်ကူးထားတာလားဆိုတာကို အငြင်းပွားခဲ့ဖူးကြပါသေးတယ်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ မဂ္ဂဇင်းမော်ဒယ်အဖြစ်နဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Jo Yeo Jeong ဟာဆိုရင် လူသိများအောင် တီဗွီအစီအစဉ်မှာ ပါဝင်တင်ဆက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ထင်သလောက်အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း The Servant ဆိုတဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလူကြီးကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ လူသိများအောင်မြင်တဲ့ မင်းသမီးအဖြစ်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတော့တယ်။
နာမည်ကျော် အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Uhm Jung Hwa ကတော့ Marriage IsaCrazy Thing ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး အဲဒီဇာတ်ကားထဲက သူမရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲပ သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်တွေကြောင့် ၂၀၀၃ ခုနှစ်ရဲ့ Paeksang Arts Awards မှာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆုကို ရရှိခဲ့ဖူးသူပါ။
4. Seo Jeong
၀ါရင့်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်သူ Seo Jeong ဟာ ရုပ်ရှင်ကားတွေ၊ TV အစီအစဉ်တွေများစွာမှာ ပါဝင်မရိုက်ကူးဘူးဆိုပေမယ့်လည်း သူမ ရိုက်ကူးခဲ့သမျှ ဇာတ်ကားတွေတိုင်းကတော့ နာမည်ကြီးဖာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် The Isle, Green Chair နဲ့ Yellow Flower ဇာတ်ကားတွေပေါ့။
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး Lee Eun Ju ကတော့ နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ Phoenix, Taegukgi: The Brotherhood of War နဲ့ The Scarlet Letter ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Scarlet Letter ဇာတ်ကားမှာဆိုရင် ၀တ်လစ်စလစ်အခန်းတွေအများကြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဝေဖန်မှုတွေကို ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားထွက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ သူမဟာ စိတ်ကျရောဂါနဲ့ သူမကိုယ်သူမ အဆုံးစီရင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယားနဲ့ အမေရိကန်ကပြားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး Yunjin Kim ဟာ အမေရိကန် TV ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးပြီး Lost, Ardor နဲ့ Shiri ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်။ Ardor မှာ သရုပ်ဆောင်ကောင်းခဲ့မှုကြောင့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်ရဲ့ Blue Dragon Film Awards ပွဲမှာ အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆုကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကျော်မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Jeon Do-yeon ဟာ Grand Bell Award, Blue Dragon Film Award နဲ့ Asia Pacific Screen Award ဆုပေးပွဲကြီးတွေက ဆုတွေအများကြီးကို ရရှိထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်းပေါင်းများစွာကို ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သူမဟာ Secret Sunshine ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားနဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ရဲ့ Cannes Film Festival မှာ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Ref : China.org